California Skunk mbeu | MyWeedSeeds.com
Iyo California Skunk mbanje mbesa strain ndeye sativa-inotarisisa kuyambuka pakati peiyo yekutanga California orenji bud akasiyana uye anoratidzira skunk mbeu strain. Muchinjikwa wakachengeta uswiti inotapira inotapira kuravira, uku uchinatsiridza kukohwa. Anomiririra yakanakisa yekuNorth California - ine gohwo rakakura uye nguva yekutanga kwemaruva. California Skunk inofanirwa kune yekutanga-nguva, novice, uye varimi vane mwaka zvakafanana. Asina simba rekubatana nekurima, ndiye imwe yesarudzo dzakanakisa kana achitsvaga mbanje dzakasiyana siyana kuti akure achifara panze (Anodzivirira zvipembenene uye anoshivirira mamiriro ekunze akanaka.) Kana pollitano. California Skunk inokunda, uye nekutarisira kwakanaka, kudzoka kwako mukudyara kuchave kwakakura, chirimwa chemhando yepamusoro. Miti yakakura kwazvo inowanzo kuburitsa gohwo repamusoro soro remabhureki ayo anozopenya nemaranjisi anopenya uye akadzika epinki tambo. California Skunk inoburitsa hwema hwekutapira hwemawiti uye hunhu, pasi payo paunozoona hashy skunk uye theme yemucitrus. Kukwirira kwaro hunhu hwesativa - hunosimudzira zvikuru uye hunopa simba nehuremu hwenzvimbo yemuviri buzz.